२० बर्ष भित्रमा सूर्योदय नगर एक नम्बर प्रदेशको ‘नमुना’ बन्नेछ: प्रेमलाल चाम्लिङ Darpansansar News
विद्यार्थी जीवनदेखि प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवादका पक्षमा वकालत गर्दै राजनीतिमा होमिएका प्रेमलाल चाम्लिङ यतिबेला इलामको ठूलो नगरपालिका सूर्योदय नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट मेयर पदका प्रत्यासी छन् । वि.स. २०४६ सालको जनआन्दोलनमा राजधानीका सडकमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका उनी गणेशमान सिंहसँगै जेल जीवन विताएपछि राजनीतिमा झनै सक्रिय बनेका हुन् ।
नेपाली काँग्रेस इलामको उपसभापति हुँदै कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका उनी गाउँमै बसेर राजनीति सक्रिय छन् । पार्टीप्रति इमान्दार र निष्ठावान नेताको परिचय बनाएका उनी संगठनभित्र दमदार अभियान संचालन गर्न नसकेको आरोप पनि बेलामौका खेप्ने गर्छन् । पार्टीले नगरपालिकाको मेयर पदमा उभ्याएपछि उनी यतिबेला चुनावी अभियानको दौडधुपमा छन् । नगरभित्रका सबैखाले समस्या बुझेको र समाधानको उपायहरु पनि आफूसँग रहेकाले मतदाताले न्याय गर्नेमा विश्वस्त रहेको अनुभव सुनाउँछन् । चुनावी दौडानका क्रममा नगरभित्रको विकासका योजनाहरुका बारेमा दर्पणसंसार डटकम टिमले प्रेमलाल चाम्लिङसँग गरेको कुराकानीको अंश:
मेयर पदका लागि आफू योग्य हुँ भन्ने कसरी सिद्ध गर्नुहुन्छ ?
म स्थानीय स्तरमा भिजेको व्यक्ति हुँ । मलाई यस नगरभित्रका सबैखाले समस्या र सम्भावनाहरुको प्रष्ट ज्ञान छ । मेरो बाजे बराजु पुस्ताले र मेरो पुस्ताले भोगेको दुःख पीडा देखि युवा पुस्ताले खोजेको र रोजेको विषयबस्तुका बारेमा म क्लियर छु ।
त्यतिमात्र होइन नेपाली काँग्रेसले अवलम्बन गरेको विकासका नीति, आधुनिक समाजको परिकल्पना, वीपीले परिकल्पना गर्नुभएको समृद्ध समाजको अवधारणाका बारेमा मलाई प्रष्ट जानकारी छ । पार्टीको योगदानकै कुरा गर्ने हो भने मैले अविचलित नभई, त्याग, निष्ठा र इमान्दारीताका साथ संगठनका लागि बर्षौ समय खर्चेको छु । जेल–नेल भोगेको छु । सबै खाले दुःख, कष्ट सहेको छु । त्यसैले मलाई यस नगरभित्रका जनता वा मतदाताले नजिकबाट चिन्ने मौका पाएका छन् । जनताहरुको इच्छा र चाहना बमोजिम म आज मेयर पदको लागि सक्षम भएर उभिएको हुँ ।
२० बर्षपछिको स्थानीय प्रतिनिधीविहीन अवस्था र २० बर्षको विकास निर्माणको ग्यापलाई तपाईंले पाँच बर्षको अवधीमा कसरी पुरा गर्नुहुन्छ ?
म सपनाको राजनीति गर्न रुचाउँदिन । असम्भव र अनावश्यक नारा दिएर जनताहरुमाझ बदनाम कमाउन पनि चाहन्न । २० बर्षको अवधी जनप्रतिनीधि विहीन भएको हो । २० बर्षको समयावधीमा अनेक खाले राजनीतिक समस्याहरु थिए । त्यस्तो अवस्थामा पनि विकासको गति भने रोकिएको छैन् । अब त झन रोकिन कुरै आएन् ।
तर यो अवधीमा जति गर्न सक्नु पर्दथ्यो त्यो सकिएन् । यसका लागि म मेरो पार्टीका तर्फबाट क्षमा पनि माग्न चाहान्छु । अबका दिनका लागि मसँग प्रष्ट खाका तयार छ । पाँच बर्ष भित्रमा गर्न सकिने कामहरुको विवरण मैले तयार गरेको छु । त्योे भन्दा पनि २० बर्षभित्रमा सूर्योदय नगरपालिकालाई प्रदेश नम्बर एकको नमुना नगर बनाउने योजना मँ सँग छ ।
चुनावी अभियानमा दौडिरहेका बेला तपाईंको प्रष्ट भिजन चाहीं के हो ?
पहिलो प्राथमिकतामा भ्रष्ट्राचारमुक्त नगरको विकास गर्ने हो । भ्रष्ट्राचारलाई न्यूनिकरण मात्र गर्न सकियो भने विकासले तिब्र गति लिन्छ । नगरभित्रका प्रशासनिक काम कारवाहीहरुलाई भ्रष्ट्राचाररहित बनाउने मेरो पहिलो लक्ष्य हो ।
ब्यक्ति र समाजमा भ्रष्ट्राचारी आचरणको विकास भएको छ, यसलाई न्यूनिकरण गर्दै सबैखाले विकासलाई अघि बढाउने लक्ष्य छ । अन्य विकासका सम्भावनाहरु समयसापेक्ष तयार गर्दै लैजाने र योजनाहरु निर्माण गरी कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर हुने लक्ष्य छ ।
यदि तपाईं मेयरको कुर्सी सम्हालेमा कार्यकालको पहिलो खण्डमा कुन कुन कुराले प्राथमिकता पाउँछ ?
मैले अघिनै पनि भनें पहिलो प्राथमिकता भनेकै भ्रष्ट्राचारमुक्त नगर बनाउने हो । त्यसपछि नगरभित्रका ढिलासुस्ती, घुसखोरी, सामाजिक व्यथितीलगायतका समस्याहरुलाई न्यूनिकरण गर्दै समृद्ध नगरपालिकाका रुपमा अघि बढ्ने सोच बनाएको छु । नगरभित्र चिया किसान देखि मजदुरहरुका अनेखाले समस्याहरु छन् । चिया उद्योगको भेग्लै समस्या छ । सिमावर्ती नगर भएकाले सिमानामा अध्यागमनको अभाव छ । यस्ता सबैखाले समस्याहरुको क्रमिक रुपमा पहिचान गरी समाधान गर्ने मेरो उदेश्य छ ।
यस सूर्योदयन गरपालिकालाई भिन्न तवरले परिवर्तन गर्न के सम्म गर्न सकिन्छ ?
सूर्योदय नगर भनेको पूर्वी नेपालको पर्यटकीय हब हो । पर्यटन क्षेत्रलाई मात्र समेटेर एउटा योजना बनाएर अघि बढ्ने हो भने यो नगर नमुना नगर बन्नेछ । पाँच बर्षकै अवधीमा सबैखाले विकास हुन नसक्ला । तर प्रष्ट खाकासहितको योजना बनाउन भने सकिन्छ । चिया–पर्यटन, कृषि पर्यटनको अवधारणा बनाएर अघि बढीयो भने काम गर्न सकिन्छ ।
नगरभित्र पर्यटनका पनि अनेक सम्भावनाहरु छन् जस्तो कि कान्छी पाथिभरा–अन्तु सिधा केवलकार, पशुपतिनगर–चित्रे गुम्बा केवलकार, लक्ष्मीपुर पोखरीमा बोटिङ, कन्याम चियाबगानको अग्लो डाँडामा भ्यूटावर, पशुपतिनगर तिनखुट्टेमा भ्यू टावर तथा अग्लो बुद्धको प्रतिमा निर्माण, फिक्कल बजारमा सुविधासम्पन्न सपिङ कम्प्लेक्स, पशुपतिनगरमा सोमेश्वरनन्दको नाममा आध्यात्मिक केन्द्र, अन्तुडाँडामा सुविधासम्पन्न भ्यूटावर, जातिय तथा सांस्कृतीक संग्राहलयहरुको निर्माण पनि गर्न सकिन्छ ।
त्यसबाहेक फिक्कल बजारलाई ‘गेटवे दार्जिलिङ’का रुपमा पनि अघि बढाउन सकिन्छ । यहाँका लाप्चा, तामाङ, योल्मू गुम्बाहरु तथा पञ्चकन्या मन्दिरलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रचार गरी भारतीय तथा बंगाली पर्यटकहरु भित्राउन सकिन्छ । प्रणामी सम्प्रदायहरुलाई लक्षित गरी धार्मिक पर्यटकहरु पनि भित्राउन सकिन्छ । पहिचान गर्दै जाने हो भने अनेक खाले सम्भावनाहरु बोकेको स्थान हो सूर्योदयनगर । त्यसैले यसका लागि सक्षम र इमान्दार प्रतिनिधी चयन गर्ने दायित्व नगरबासीको काँधमा छ ।
पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो, यस नगरभित्र के–के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
मैले माथि नै पनि भने नगरभित्र पहिचान गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन् । चिया पर्यटनको लागि यहाँ चिया संग्राहलय साथै चियाबारी भित्र पार्क तथा सर्ट हाइकिङ पनि गर्न सकिने ब्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । जसले गर्दा पश्चिमा पर्यटकहरु यहाँ आउन इच्छा राख्न सक्छन् । त्यसैले पर्यटनको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास जरुरी देखिन्छ ।
नगरभित्रका अन्य सम्भावना र समस्याहरु बताइदिनुहोस न ?
शैक्षिक क्षेत्रका लागि सूर्योदय नगर भित्र कृषि विश्वविद्यालयको आवश्यक्ता छ । फिक्कलमा सुविधासम्पन्न शिक्षण अस्पताल, आइतबारेमा आर्युवेदको अन्तराष्ट्रिय स्तरको अस्पताल जरुरी भएको छ । मयूँ तथा सिद्धी खोलामा साना जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानीकर्ताहरु भित्राउने, हर्कटेको जंगललाई अर्किट संरक्षण क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने, फिक्कलमा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण साथै सुविधासम्पन्न होटलहरुका लागि लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न सकिन्छ ।
जेष्ठ नागरिक, गरिब, असाहय तथा महिलाहरुलाई स्वास्थ्य उपचारमा विशेष सहुलियत साथै युवाहरुका लागि स्वरोजगार कोषलाई बृहत बनाउन सकिन्छ । गृहीणिहरुका निम्ती घरमै रोजगारीका अवसरहरु प्रदान गर्न सीपमुलक र उपयोगी तालिमहरु आवश्य देखिएको छ । मेहेलबोटेमा प्रणामी सम्प्रदायका लागि पवित्र कृष्णधाम, गोर्खेमा मत्स्य विकास परियोजना, समाल्बुङमा सुन्तला तथा किवी खेती विकास परियोजना, घरघरमा रोजगारका लागि नगर बेरोजगार कोषको व्यवस्था जस्ता धेरै सम्भावनाहरु रहेका छन् ।